Shiinaha Steam & Air Retort warshad iyo soosaarayaasha | Dingtaisheng
Moduleka xakamaynta heerkulka (nidaamka ****) ee ay soo saartay DTS wuxuu leeyahay ilaa 12 marxaladood oo heerkulka lagu xakameynayo, talaabada ama qumanaanta waxaa lagu dooran karaa iyadoo la raacayo alaabooyin kala duwan iyo habka habka kululaynta ee habka karinta, si soo noqnoqoshada iyo xasiloonida udhaxeysa alaabooyinka si fiican ayaa loo kordhiyaa, heerkulka waxaa lagu xakameyn karaa gudaha ± 0.3 ℃.
Looma baahna in la kululeeyo warbaahinta kale (sida biyaha kulul), sicirka kuleylku waa mid aad u dhakhso badan.
Qaybta xakamaynta cadaadiska (nidaamka ****) ee ay soo saartay DTS waxay si isdaba joog ah u hagaajinaysaa cadaadiska inta lagu gudajiro nidaamka oo dhan si loogu waafajiyo isbeddelada cadaadiska gudaha ee baakadaha wax soo saarka, sidaa darteed heerka cilladaha baakadka wax soo saarka ayaa la yareeyaa, iyadoon loo eegin adayga weelka qasacadaha, daasadaha aluminiumka ama dhalooyinka caagga ah, sanduuqyada balaastigga ah ama haamaha jilicsan ayaa si fudud loogu qanci karaa, cadaadiskana waxaa lagu xakamayn karaa ± 0.05Bar.
> Uumiga si toos ah ayuu u kululaa, qiiq looma baahna, iyo luminta ugu yar ee uumiga.
Nidaamkani wuxuu ku saleysan yahay kuleylka tooska ah ee loogu talagalay baakadaha cuntada ee uumiga, iyada oo aan lahayn warbaahinta kale ee kuleylka (tusaale ahaan, nidaamka buufinta waxaa loo isticmaalaa biyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah). Maaddaama taageerayaasha xoogga leh ay ku qasbaan uumiga soo-celinta si ay u sameeyaan wareeg, uumigu waa mid isku mid ah. Taageerayaashu way dardargelin karaan is-weydaarsiga kuleylka u dhexeeya uumiga iyo baakadaha cuntada.
Inta hawsha socoto oo dhan, cadaadiska kujira soo celinta waxaa xukuma barnaamijka iyadoo quudineysa ama ku sii deynaysa hawo isdabamartay iyada oo loo marayo waalka otomaatigga ah ee loogu talagalay soo celinta. Maaddaama uumiga iyo nadiifinta hawada ee isku dhafan awgeed, cadaadiska ku jira soo celinta saameyn kuma yeelanayo heerkulka, cadaadiskana waxaa loo dejin karaa si xor ah iyadoo la raacayo baakadaha alaabooyinka kala duwan, taasoo ka dhigeysa qalabka mid si ballaaran loo adeegsan karo (daasadaha saddexda ah, laba gasacadood oo laba xabbo ah) , Bacaha baakadaha jilicsan, dhalooyinka dhalada ah, baakadaha caaga ah iwm).
Isku mid ahaanta qaybinta heerkulka ee soo noqoshada waa +/- 0.3 ℃, cadaadiskana waxaa lagu xakameynayaa 0.05Bar.
Xidhmada xirmada dahaarka Kiish baakad dabacsan
Waxyaalaha caanaha laga sameeyo: gasacadaha; dhalooyinka caagga ah, koobabka; bacaha baakadaha dabacsan
Khudaarta iyo miraha (boqoshaada, khudradda, digirta): qasacadaha daasadaha; bacaha baakadaha dabacsan; Dib-u-dhiska Tetra
Cunnooyinka carruurta: daasadaha daasadda; bacaha baakadaha dabacsan
Hore: Soo Celinta Tooska ah ee Tooska ah
Xiga: Duuliyaha Duuliyaha
Mashiinka Bacriminta Hawo-celinta
Duulista Dufcaddii Hawada Uumiga
Air Steam Dufcaddii Retort Canner Mashiinka
Mashiinka Awoodda Uumi-celinta